Hadda waxaad kala soo bixi kartaa Wicitaanka Waajibaadka: Moobilkaaga iPhone iyo iPad | Wararka IPhone
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa Wicitaanka Waajibaadka: Moobilkaaga iPhone iyo iPad
IPad-ku wuxuu noqday mashiin aad u qurux badan oo ay ka buuxdo fursado iyadoo loo mahadcelinayo macruufka 13, mid ka mid ah fursadahaas, sida iska cad, waa inuu ciyaaro oo uu wakhti fiican helo xitaa iyadoo ay la socdaan PlayStation 4 iyo Xbox One kontoroolayaasha. , laakiin ciyaar ayaa timid oo aan sanado sugeynay waana inay soo jiidataa indhahayaga oo dhan xilligan. Wicitaanka Waajibaadka: Mobilka, taxanaha weligiis ah ayaa hadda laga heli karaa macruufka App Store wuxuuna ku habboon yahay labada iPhone iyo iPad, maxaad sugeysaa inaad soo dejiso? Nala soo socodsii.
Cinwaankan cusub ee 'Activision' iyo 'Tencent' ay sameeyeen waa bilaash, in kasta oo ay sideed kale noqon karto waxay leedahay walxo taxane ah oo qaabeyn ah oo toos looga iibsan karo dukaankaaga. Waxaan haynaa khariidado si cad loo aqoonsan karo, sida qaar ka mid ah kuwii horeyba ugu jiray Wicitaanka Waajibaadka: Black Ops IV iyo Nuketown. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah qaababka ciyaarta ee soo jiidan doona feejignaanteenna ugu badnaan shaki la'aan wuxuu noqon doonaa Battleroyale oo u yimaada dethrone PUBG iyo Fortnite, boqorka cad ee ciyaaraha fiidiyowga ee taleefannada gacanta. Si kastaba ha noqotee, ma jiri doono yaraanta kooxda (5vs5).
Hadaad doorbiday iyo Sida cusub ee ku jirta iOS 13 iyo iPadOS, waxaad awoodi doontaa inaad ciyaarta si toos ah ugu adeegsato mid ka mid ah ilaaliyeyaasha la jaan qaadi kara (MFi-ga soo-jireenka ah, PS4-ka iyo XBO) oo sidaa awgeed lagu helo natiijooyin wanaagsan, gaar ahaan iPad-ka, oo ah halka aan ku yeelan doonno shaashad ka sii wanaagsan oo ka wanaagsan sidii aan uga faa'iideysan lahayn. Ciyaartan fiidiyowga ah ayaa sidoo kale laga heli karaa barnaamijyada kale sida Android, sidaa darteed waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u noqotid soo dejin dhab ah iyo ku-guuleysiga isticmaalaha, si dhow ayaan ula socon doonnaa si aan u eegno in guushiisu ay tahay mid muddo dheer soconaysa ama ubax maalin keliya ah.
Waad soo dejisan kartaa Wicitaanka Waajibaadka bilaash ah adoo maraya isku xirkaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Hadda waxaad kala soo bixi kartaa Wicitaanka Waajibaadka: Moobilkaaga iPhone iyo iPad
Apple TV ayaa mar kale laga tagay ...
juanma 0089 dijo
aaway ikhtiyaarkii loogu ciyaari lahaa kantaroolaha ps4? Ma jirto hab lagu ciyaaro xitaa iyadoo la koontaroolayo.